Factory Machining CNC - Mpanamboatra Machining Machining China, Mpamatsy
Mihodina ny CNC
Ny fihodinan'ny CNC dia mamokatra ampahany amin'ny alàlan'ny fitaovana "famadihana" tsorakazo ary famahanana fitaovana fanapahana ho lasa fitaovana famadihana. Amin'ny latina dia mihodina ny fitaovana hohetezana raha toa ka ampidirina ao anaty ilay fitaovana mihodina ilay mpanapaka. Ny mpanapaka dia azo omena amina zoro isan-karazany ary maro ny endrika fitaovana azo ampiasaina.
Ny CNC Milling dia manana tombony betsaka noho ny fizotry ny famokarana hafa. Mandany vola amin'ny hazakazaka fohy. Ny endrika sarotra sy ny fandeferana avo lenta dia azo atao. Famaranana malefaka azo tanterahina.
adiresy No.7 Yuansheng Rd, Yangjian Industrial Park, Wuxi, Sina
boaty mailaka info@leadmachinery.net